Barcelona oo dalabkii labaad oo qaali ah ka gudbisay xiddiga kooxda Chelsea ee Willian… (Miyey saxiixiisa ku garaaci doontaa Man United?) – Gool FM
Barcelona oo dalabkii labaad oo qaali ah ka gudbisay xiddiga kooxda Chelsea ee Willian… (Miyey saxiixiisa ku garaaci doontaa Man United?)
(Barcelona) 12 Luulyo 2018. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay dalabkii labaad oo qaali ah, kaasoo ku kacaya 60 milyan oo gini ka gudbisay Weeraryahanka naadiga Chelsea ee Willian.
Willian ayaa dhaliyey 13 gool waxaa uu caawiyey 12 gool oo kale 55 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa Chelsea xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, laakiin mustaqbalkiisa kooxda ayaa su’aal weyn la geliyey labadii bilood ee la soo dhaafay.
Manchester United ayaa si weyn loola xiriirinayey inay u soo dhaaqdo 29-sano jirkaan bishii la soo dhaafay, waxaana lagu soo waramayaa in tababaraha Red Devils ee Jose Mourinho uu kalsooni ku qabo inuu xagaagan la soo saxiixan doono xiddiga reer Brazil.
Yeelkeede, Wargeyska Daily Mail ayaa warinaya in Barcelona dalabadkii labaad oo qaali ah kaasoo ku kacaya 60 milyan oo gini ka gudbisay Willian, kaddib markii ay Chelsea ka soo diiday dalabkii hore oo ahaa 50 milyan.
Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in Barcelona ay ka go’an tahay in xiddigan Willian ay geysato garoonkeeda Camp Nou xilli ciyaareedka 2018-19.
Willian, kaasoo xulkiisa qaranka Brazil u metelay Koobka Adduunka 2018 ayaa la rumaysan inuu weli xaalad xun ku jiro iyadoo aysan isku fiicnayn isaga iyo Antonio Conte inkastoo macallinkaan reer Talyaani mustaqbalkiisa kooxda uu walaac badan ka jiro.
Wakiilka Cristiano Ronaldo oo xaqiijiyey kooxda uu xiddigan kubadda cagta kaga fariisan doono
"Markaan joojiyo Ciyaaraha inta Maqaayad Fariisto ayaan...". Marcelo oo Fariin MURUGO leh ku Macslaameeyay Saaxiibkiisa Rumaad ee Ronaldo